Shirkii u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo AMISOM oo la soo gaba gabeeyay…. – Balcad.com Teyteyleey
Shirkii u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo AMISOM oo la soo gaba gabeeyay….
By Abdi Malik	 On Jul 30, 2017
Shirkii u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo AMISOM ayaa xalay lagu soo gaba gabeeyay magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay sidii Ciidamada Soomaaliya ammaanka dalka ugala wareegi lahaa AMISOM sanadaha soo socda.
Shirkan oo socday shan cisho ayaa waxaa ka qeyb galay Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Xukuumadda, Wasiirka Gaashaandhigga, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Taliyeyaasha ciidamada, Wakiilka Midowga Afrika ahna Madaxa AMISOM, Taliyaha AMISOM iyo Taliyeyaasha qeybaha howl galka AMISOM iyo Saraakiil ka socotay Mareykanka, Midowga Yurub iyo Britain.
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya C/rashiid C/llaahi Maxamed ayaa sheegay in shirka laga soo saaray war murtiyeed ka kooban dhowr qodob, ssagoo xusay in shirkan uu ka koobnaa saddex qeybood, isagoo xusay ujeedka shirka uu ahaa sidii Ciidamada Soomaaliyeed ammaanka dalka ugala wareegi lahaayeen AMISOM.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in shirkan uu daba socday shirkii May ee ka dhacay London iyo shirkii dhowaan Madaxda Soomaalida ku yeesheen magaalada Muqdisho.
Wasiirka ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen sidii Ciidamada Soomaaliya ay ammaanka dalka u hanan lahaayeen, isla markaana si tartiib tartiib ay AMISOM ammaanka ugala wareegi doonaan sida uu yiri.
Waxaa uu sheegay in la isku afgartay in la dhimo tirada Ciidamada AMISOM, isla markaana dhamaadka sanadkan ay bilaaban doonto tiradii u horeysay ee ciidamada AMISOM oo dalalkooda ku laaban doonaan.
Mr C/rashiid ayaa sheegay in howsha ka bixitaanka AMISOM ee dalka ay dhowr sano socon doono, illaa ay ka xaqiijiyaan arrimaha amniga, degenaanshaha iyo xasiloonida dalka.
Howl galka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhowaan u buuxsantay 10 sano, waxaana qorshaha uu yahay sidii marka la gaaro sanadka 2018 ay amniga dalka ugu wareejin lahaayeen Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
The post Shirkii u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo AMISOM oo la soo gaba gabeeyay…. appeared first on Ilwareed Online.
Shir looga hadlayo Mashaariicda Midowga Yurub iyo sida looga faaiideysto oo ka dhacay Muqdisho
Booliska Australia oo heegan lagaliyay fashilkii ay fashiliyeen weerar lagu soo ridi rabay diyaarad….